Taariikhda My Butros » 7 RUNTA Fool saabsan Dating casriga ah
Dating ayaa qayb ka mid ah dhaqanka reer galbeedka ee ah tan iyo muddo dheer. Si kastaba ha ahaatee, shukaansi ee maantu ay tahay si wayn uga duwan in ay noqdaan waxa loo isticmaalo inta lagu jiro 60 ah, 70s, 80s iyo xitaa 90s.
Yuulka ee internetka iyo waxa la bixitaanka websites shukaansi waa inta badan mas'uul ka ah in isbeddelkan. Inkastoo waxyaabo badan oo in ka dhigo Maalinta casriga shukaansi fiican iyo ka xiiso badan waxaa (shukaansiga online hubaal waa mid ka mid ah), jiritaanka hubaynta aan laga aad beeniyay. Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah xaqiiqooyinka fool xun oo ku saabsan shukaansi casri ah oo kuu ogolaaneysaa in aad hesho qof aqoon u leh, waxayse leeyihiin kuwa.
1. Dadka ayaa ku dhawaad ​​illoobeen inay la hadasho midba midka kale
Isgaarsiinta Easy waa mid ka mid ah hadiyado ugu weyn in technology ayaa la siiyaa aadanaha oo la. Maanta, dad jacayl u hesho in ay xidhiidh la midba midka kale xitaa iska iyagu yihiin miles. Si kastaba ha ahaatee, horumarinta this of technology ayaa sidoo kale ku dhintay dad ujeeda in aad la hadasho.
Haa, aad akhrido xaq u; dadka ugu badan ee maanta ha damcin in ay maqlaan codka ay jeclaayeen, taxane ah oo fariimaha qoraalka sameeyo shaqo, waxayna u. Maxay ku saabsan taleefan oo? Oh, inta badan kuwa ay yihiin wax la soo dhaafay ka.
2. Waxaad tahay mid ka mid ah, haddii aad tahay Jaahiliinta
Waxaad doonaysaa in aad ku guuleysato wadnaha qof ka? Maanta, Habka ugu fudud ee sameeyaan ay tahay in iyagoo aan ogayn. Waxaad ka muuqan doontaa soo jiidasho in rafiiqa aad, haddii aad daryeel yar. Maalmahan, ku dhowaad hal ma u muuqataa in ay xiiseynayaan in shakhsiyaadka soo bandhigeysa xiisaha.
3. Dareen-celinta had iyo jeer waa khiyaano
Falcelinta kelmadaha waa wax macquul ah sida ugu fog dad ka soo jeeda jiilka haatan jooga walaacsan yihiin. Qofka oo aan haba yaraatee la yaab kula dhaqmo si la mid ah oo leeyahay indho la mid ah isaga / iyada wejigiisii ​​oo ah sidii uu qofka ku runtii xiiso aad ee. Dadka intooda badan, maanta, ilowday sida ay u muujiyaan shucuurta iyo ay u arkaan in ay tayo wanaagsan.
4. Money, lacagta iyo lacag ka dibna ku soo muuqday
War saxaafadeedka ayaa lagu kor ku xusan waa run ugu horayn loogu talagalay ragga; loogu tala galay dumarka, waxa ay noqon doontaa sida wareega kale (muuqaalka yimaado lacag ugu horeysay ka dibna). Marka la soo koobo, haddii qofka aad shukaansi noqon doonaa xiiso aad ee waxay ku xiran tahay meesha aad ayaa ku jirta kaalinta fog sida labadan arrimood walaacsan yihiin. Haa, kaliya labo kuwaas; wax walba oo kale yimaado ka dib.
5. Arrimuhu waa mid aad u abaabulan in ay ka taataabtay
Maanta abaabulka tagi jaceyl ayaa noqday mid aad u fudud. Waxaad samayn wicitaan oo taleefan ah iyo bixiyeyaasha adeegga qabanqaabin doono cashada laambad aad u. Tani si weyn ayay u lahayd jiidashada ka mid wadaajin jirray leh qorshayaal sida hore.
6. Privacy? Maxaa gaarka ah?
Ma jiraan wax gaar loo leeyahay oo ku saabsan shukaansi maanta. Waad ku taariikhaysan qof galabtii iyo fiidkii ay aad arki doono sawiro laba ee aad wada riixi on qofka kale ee warbaahinta bulshada koonto ku xiga taxane ah oo comments la weedho creepy. Haddii aadan u baran in ay, aadan iska leh qarnigan.
7. Oo waxay ku yidhaahdeen waa weyn yahay si sahlan hadda
Just qoraal ah adiga iyo lammaanahaaga idinku garan doonaan inaad no ku badan yihiin ee ku jirta isaga / iyada. Mararka qoraalka weyni ay ka kooban yihiin oo kaliya labo ama erayada. Ma ilaa xiriir runtii in si fudud jebinta?
Maanta, dadka ayaa hubaal sabar la'aan badan oo aan joogtada ahayn; la'aanta waqti sidoo kale waa jinni weyn. Si kastaba ha ahaatee, ma diidi karo in ay weli doonayaa in aan jeclahay oo la jecel yahay. Sidaas, ugu dhakhsaha badan waqti iman karta marka shukaansi noqdo sidii jaceyl iyo xiiso badan sidii ay ahaan ee la soo dhaafay loo isticmaalo.